Low-resource web browser တစ်ခုကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Amazon – AsiaApps
April 19, 2018 April 19, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Low-resource web browser တစ်ခုကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Amazon
Amazon ဟာ “Internet” လို့အမည်ရှိတဲ့ Low-resource web browser လေးတစ်ခုကို Android ဖုန်းတွေအတွက် ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ အိန္ဒိယတစ်ခုတည်းမှာပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ (အိန္ဒိယ VPN ကျော်ထားတဲ့ Device တွေလည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။)
Internet ဆိုတဲ့ Web browser မှာ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Search engine ကို Bing (သို့) google တစ်ခုခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Browser ရဲ့ Hompage မှာ မိတ်ဆွေအများဆုံးဝင်ကြည့်ထားတဲ့ Website တွေနဲ့ လက်တလောရေပန်းစားနေတဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာတွေကို မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ Normal နဲ့ Private ဆိုတဲ့ Option နှစ်ခုပါဝင်ပါသေးတယ်။ Normal ကတော့ မိတ်ဆွေရဲ့ History တွေကို ပုံမှန် Web browser တွေအတိုင်း Save ပေးသွားမှာပါ။ Private မှာတော့ မိတ်ဆွေ ဘယ် Website ကိုပဲသွားသွား History တွေကို auto လိုက် Save ပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိ Amazon ရဲ့ Internet Web browser ကကိုခြုံကြည့်ရင် Google ရဲ့ Chrome နဲ့တော်တော်လေးဆင်နေတယ်ဗျ။
အဲ့ဒါဆို Amazon ရဲ့ Browser အသစ်ကတခြား Browser တွေနဲ့ဘာမှမကွာဘူးပေါ့ ?
မဟုတ်ပါဘူး…. အကြီးမားဆုံးကွာဟမှုကတော့ Low-resource web browser ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်လောက်အထိ Low-resource ဖြစ်လဲဆိုရင် Browser တစ်ခုလုံးကို 2MB file size နဲ့ကို Download ဆွဲနိုင်တဲ့အထိပါပဲ။ အိန္ဒိယမှာပဲ အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ကွာဟမှုအသေးစိတ်ကျကျ ပြောနိုင်ဖို့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စောင့်မျှော်နေရဉီးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယား၊ တရုတ် နဲ့ ဂျပန် ဘာသာစကားတွေကို အခမဲ့လေ့လာနိုင်မယ့် app LingoDeer – Learn Languages